Fampisehoana vokatra teknolojia | Vaovao momba ny gadget
Velona tokoa ny sehatry ny haitao. Isan'andro ireo marika manolotra vokatra teknolojia vaovao manandrana manaitra ny tsena sy ny mpanjifa. Avy amin'ny Actualidad Gadget izahay no mitondra ny vaovao rehetra momba ny hetsika fampisehoana amin'ny karazana fitaovana rehetra.
Tianao ho vaovao inona amin'ireo marika toa an'i Samsung, LG, Sony, Apple, Xioami ary maro hafa no eo?. Aza adino ity fizarana ity. Manolotra anao izahay sary sy horonan-tsary manokana nataon'ny ekipa mpanonta anay.
Vaovao farany momba ny fampisehoana vokatra
ny Paco L Gutierrez hace 7 volana .
Tsikelikely ny isan'ireo solosaina finday izay manavao ireo mpikirakira azy amin'ny Intel vaovao dia ...
Amazon dia manolotra ny Fire HD 8 vaovao miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana
ny Miguel Hernandez hace 2 taona .
Ny takelaka dia tsena toa maty, na eo aza izany dia mbola manana ny mpihaino mahaliana azy ireo, amin'ny ...
Poco F2 Pro: efijery bebe kokoa, fampisehoana bebe kokoa ary vidiny bebe kokoa
Ny orinasan'ny Xiaomi antsoina hoe Pocophone dia tonga roa taona lasa teo amin'ny tsena Espaniôla miaraka amin'ny Poco F1, terminal izay ...
Exynos 9825: ny processeur an'ny Galaxy Note 10
Ny Galaxy Note 10 sy 10+ dia ofisialy, efa fantatsika izay navelan'i Samsung ho antsika amin'ny farany ambony vaovao….
Efa nanambara izany izahay, fotoana fohy monja dia lasa liana tamin'ny lalao video ilay goavambe niaraka tamin'ny renivohitra G….
Ity no Tesla Model Y vaovao sy mahavariana
Ary izany dia rehefa afaka herinandro vitsivitsy izay na i Elon Musk tenany aza dia nanampy ahiahy sy vazivazy ...
Huawei mandefa ny Huawei Y7 2019, finday avo lenta ho an'ny paosy rehetra miaraka amin'i AI
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, hitantsika ny fomba nahatonga ny mpanamboatra Aziatika Huawei ho lasa safidy hafa ao anatiny ...
Mampitaha ny Samsung Galaxy Fold sy ny Huawei Mate X izahay
Vao herinandro vitsy lasa izay dia tsy fantatsika raha ity no taona handefasana smartphone. Tsaho, vinavina sy maro hafa ...
Ity ilay Sony Xperia 1 vaovao natolotra tao amin'ny MWC
Sony dia nanosika antsika hifoha maraina amin'ny hetsika referansy telephony manerantany, MWC. Nanangana ny orinasa ...
Hihaona amin'ny telefaona finday Bluetooth Samsung Galaxy Buds vaovao
Nanana marika 20 tamin'ny kalandrie nandritra ny fotoana ela izahay. Androany farany dia lasa andro Samsung, ...
Andro fanombohana androany ary ho hitantsika amin'ny fomba ofisialy ny maodely Huawei Mate vaovao, ...